देशमा विकास, सुशासन खै ? - WorldWide Khabar
देशमा विकास, सुशासन खै ?
राजनीतिले जनतालाई खान लगाउन दिदैन तर पनि जनता राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको पछि नै छन । अब पनि उनीहरुको पछि लागेर के गर्ने ? राजनीतिक दल र तिनका नेताको पछि लागेको कति बर्ष भयो यसो हिसाव गर्नुस् त हामी के पाएऔं ? हामीले केवल महंगी पाएका छौं । दिन दिनै महंगी बढेको बढै छ कसरी जिवन धान्ने भन्ने चिन्ता हामी सबै गरिव जनतामा छ । के हामी जीन्दगी चिन्तामा बिताउन पाएका हौं ? यो होइन, हाम्रो देशका शासक, प्रशासक नै गलत भए ।
देश सहि ढंगले चल्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा हामीले दुख्ख पाइरहेका छौं र पाइरहने छौ । कम्युनिस्टहरुको त कुरा मात्र हो, ब्यवहारमा सिन्को भाँच्दैनन् । चर्को भाषण गरेर मात्र हुन्छ की जनताको पनि सेवा गर्ने हो ? कम्युनिस्ट देखि पनि आमजनता वाक्कदिक्क भइसकेको अवस्था छ । विकास, सुशासन र समृद्धिका कुरा गर्ने ब्यवहारमा लागु नगर्ने कति दिन जनतालाई ढाँटेर राजनीति गर्ने ? तिमीहरुको कार्यशैली जनताले देखि सकेका छन । सरकारमा हुँदा जनताको हितमा काम गरेको खै ? हिसाव किताव त हामी संग छनी । जनता भोकै छन । जनताका छोरा छोरी बेरोजगारी छन के तिमीहरुलाई थाहा छ ? अर्बौं रुपैयाँ जनताको करको पैसा निर्वाचनमा खर्च हुने गरेको छ ।
हरेक निर्वाचनबाट बन्ने सरकारले जनताको काम गर्न सकेको छैन । जनता आर्कोशित छन । राजनीतिले देश बर्बाद भइरहेको छ । जनतामा निराशा छाएको छ । यो राजनीतिक नेतृत्वबाट देश बन्न सक्दैन । जनताले बिकल्प खोज्नु पर्छ । निर्वाचनको बेला विज्ञबाट घोषणापत्र तयार पार्न लगाउने, जनतालाई शब्दजालमा पारेर भोट तान्ने काम बाहेक यी राजनीतिक दलहरुले अरु के काम गरे ? नेताको कार्यशैलीका कारण देश अघि बढन सकेन । अझै पनि नेतृत्वको सोचमा परिवर्तन भएको छैन । यसो हुनुका पछाडि कमजोर नेतृत्वले हो ।
देश किन सुशासन र विधिको शासनमा चल्न सकेन ? राज्यले सरकारी सेवाहरू चुस्त, दुरूस्त, पारदर्शी र सर्बिस डेलीभरीमा सक्षम गराउन किन सकेन ? प्रश्न त उठेकै छन नी । नेताहरुले आफन्तजन पोस्ने, अयोग्यलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, योग्यलाई पाखा लगाउने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, अध्ययन, अनुसन्धान नगर्ने, आलोचना नसहने, नागरिकका कुरा नसुन्ने, जनताका दुःख नदेख्ने, नबुभ्mने, विदेशीको चाकडी गर्ने आदी इत्यादी जनताले बुझेका छन । हाम्रो देशमा राजनीति गर्न न त शिक्षाको डिग्री चाहिन्छ न त कुनै विशिष्ट योग्यता नै यो नै समस्या हो । यीनीहरु निर्वाचननजिक आएपछि मतदाताको मन जित्न छेपारे प्रवृत्ति देखाउँछन् । अब जनताले बिचार गर्नु पर्छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बिकास भएको खै ? निर्वाचित जनप्रतिनिधि आलोचित बन्दै गएका छन् । देशमा विकास, सुशासन खै ? जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । अनि यी राजनीतिक दल र यिनका नेतृत्वकर्तालाई लाज लागेको खैं ? देश भ्रष्टाचार र कमिसनमा डुबेको छ । देशको आर्थिकस्तर अगाडि बढन सकेको छैन । गरिब देशका धनी नेता भए । अब सोच्नु पर्छ । विकासको आधारशीला तयार गरेको खै ? अहिले सर्वहारा राजनीतिक दलका नेता अकुत सम्पत्तिका मालिक भएको सामाजिक आलोचना छ । यी सर्वहाराका नेताहरुको काठमाडौ.मा सुविधा सम्पन्न घर, चिल्ला गाडी र वरिपरि सेवक छन् । अब भन्नुस् यीनीहरुबाट के आश गर्ने ?
Previous articleगीतकार प्रकाश सापकोटाको शव्दमा ‘नौलाख तारा’ सार्वजनिक(भिडियो)
Next article‘आउ न आउ’भन्दै चकलेटी नायक संजित भण्डारी र मोडल चन्दा(भिडियो)